नयाँ खेलाडीले आफुलाई प्रमाणित गरेका छन् : विराज महर्जन (अन्तरवार्ता) - Khelpati
नयाँ खेलाडीले आफुलाई प्रमाणित गरेका छन् : विराज महर्जन (अन्तरवार्ता)
आइतवार, जेठ २६, २०७६ गिता राई
राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिम दुई मैत्रीपुर्ण फुटबल म्याच खेलेर शनिबार घर फर्किएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षकमा योहान कालिनलाई नियुक्त गर्दै राष्ट्रिय फुटबल टिमको खेललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालले अब विश्वकप छनोटका खेलहरु खेल्दैछ ।
र पहिलो पटक नेपालले सिधै दोस्रो चरणको छनोट खेल्न लागेको हो । दोस्रो चरणमा पक्कैपनि नेपालले आफु भन्दा बलिया र बरियतामा माथि रहेका टोलीसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
सोही कारण एन्फाले आफुभन्दा बलिया टिमसंग मैत्रीपुर्ण खेल खेलाईरहेको छ । मुख्य प्रशिक्षक कालिन समेत नेपाली टिममा विभिन्न प्रयोग गरिरहेका छन् । खेल्ने शैली र खेलाडीमा उनको प्रयोग निरन्तर जारी छ ।
नेपालले गत हप्तामात्र दुई मैत्रीपुर्ण म्याच खेल्यो । जुनको पहिलो साता मलेसिया र चाईनिज ताईपेसंग मैत्रीपुर्ण खेल खेल्यो । पहिलो खेलमा मलेसियासंग २–० ले हारेको नेपालले दोस्रो खेलमा ताईवान टोलीसंग १–१ को बराबरी खेलेको थियो ।
पछिल्लो मैत्रीपुर्ण खेलमा नेपालको प्रर्दशनलाई लिएर खेलपाटीकर्मी गिता राईले राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान विराज महर्जनसंग कुराकानी गरेकी छिन् ।
समग्रमा नेपाली फुटबल टिमको भ्रमण कस्तो रह्यो ?
सुरुमा हामीले मलेसियासँग र दोस्रोमा ताईपेसंग मैत्रीपुर्ण म्याच खेल्यौ । मलेसियासँगको खेलमा खेल्ने मैदानको समस्या भयो । मैदानमा बाक्लो घाँस थियो र त्यो पनि नकाटिएको अवस्थामा थियो ।
तर खेलिएको रंगशाला र मौसम एकदमै राम्रो थियो । खेलाडीले पनि राम्रो प्रयास गरे तर पहिलो खेल हार्न बाध्य भयौ । ताईपेसँगको दोस्रो खेलमा भने राम्रो प्रर्दशन भयो । एक गोलले पछि परेपनि खेलमा फर्कन सक्यौ । प्रशिक्षकको रणनीति अनुसार धेरै राम्रो खेल भयो ।
नयाँ प्रशिक्षकको नेतृत्वमा तीन देशसंग नेपालले मैत्रीपुर्ण म्याच खेलेको छ । अब टिमको कमजोरी के रह्यो ?
यसपटक नेपाली टिमले स–साना मिस पास धेरै खेल्यो । थ्रो बल राम्रो देखिएन । मुख्य समस्या त्यही रह्यो । सोही कारण मलेसियासंग खेल्न सकेनौ । दोस्रो खेलमा सुधार ग¥यौ । उनीहरुभन्दा हामीले धेरै बलहरु पायौ । दोस्रो खेल तुलनात्मक रुपमा सुधार भएको देखियो ।
भ्रमणबाट हामीले सिकेको कुरा के रह्यो ?
प्रशिक्षकले नयाँ अनुहारलाई मौका दिए । पुरानो टिमका ५ खेलाडी छैनन् । बिमल घर्ती मगर र भरत खवास टिममा छैनन् । नयाँ खेलाडीले आफुलाई साबित गर्ने मौका पाए । अभिषेक रिजाल, सन्तोष तामाङले आफुलाई सक्षम साबित गरेका छन् । उनीहरुको सहयोगमा गोल गर्न सकेका छौ ।
हामीभन्दा माथिल्लो वरियताका टिमसंग बराबरीको नतिजा निकाल्न सफल रह्यौ । हामीले सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्यौ, त्यही सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो ।
वरियतामा माथिल्लो टिमसंग बराबरी खेल्यौ तर तल्लो वरियताको मलेसियासँग हार्न पुग्यौ । कसरी ?
मलेसिया हामीभन्दा धेरै राम्रो हो । उनीहरु फिफाको कारबाहीमा परेकाले तल गएको हो । हामी विश्वकप छनोटको सिधै दोस्रो चरणबाट खेल्दैछौ । उनीहरु पहिलो चरणबाट खेल्दैछन् । तर उनीहरुलाई कमजोर टिम भन्न मिल्दैन ।
दक्षिण पुर्वी एसियाका देश हामीभन्दा निकै राम्रो छन् । मलेसया निरन्तर खेल्दै र राम्रो नतिजा निकाल्दै आएको छ । उनीहरुको टिमको प्रर्दशन, आधारभुत संरचना र सुविधाहरु एकदमै राम्रो छ ।
सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु के–के हुन् ?
पहिलो खेलमा डिफेन्स लाइनले गर्दा पेनाल्टीमा गोल खाएका थियौ । अनावश्यक गल्तीको सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्ता स–साना कुरामा ध्यान दिएमा अझै अगाडी बढ्न सक्छौ ।
जति धेरै मैत्रीपुर्ण खेल खेल्यो, जति खेलाडीलाई सहभागी गराउन सक्यौ, अझै खेलको विकास हुन्छ । ठुला टिमसंग हार्ने डरभन्दा पनि अघि बढेर खेल्नुपर्छ भन्ने मनोवल विकास हुन्छ । नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्छ । त्यसो गरेमा निश्चित रुपमा लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ ।
टिमले बिमल तथा भरतलाई कत्तिको सम्झियो ?
हामीले धेरै सम्झियौ । उनीहरु भनेको अनुभवी खेलाडी र आफुलाई साबित गरिसकेको खेलाडी हुन् । तरपनि फुटबलमा शारिरिक र मानसिक रुपमा फिट हुन आवश्यक छ । दुईमा एक चिजको पनि कमी भयो भने खेलाडीले खेल्न सक्दैन ।
एनभीए भलिबल लिगको विजेताले ३ लाख पाउने
पाकिस्तान सुपर लिग स्थगित
डाइटविना ओलम्पिकको तयारी !
पश्चिम रुकुमलाई उपाधि
म्याकेनी युभेन्ट्सका स्थायी खेलाडी
झम्सिखेलविरुद्ध श्री भगवती (लाईभ) स्थानः समयः